Nexans တူရကီ, မူပိုင်ခွင့်mobıwayနယူးကြိတ်စက် Kit ကိုထုတ်ဖော်ပြသ - RayHaber
Homeတူရကီအရှေ့တောင် Anatolia ဒေသကြီး27 GaziantepNexans တူရကီ, မူပိုင်ခွင့်mobıwayမိတ်ဆက်နယူးကြိတ်စက် Kit
28 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 27 Gaziantep, အရှေ့တောင် Anatolia ဒေသကြီး, အထွေထွေ, Advertising ကြော်ငြာ (Advertorial), တူရကီ 0
nexans ကြက်ဆင်သစ်ကိုကြိတ်စက်ကိရိယာအစုံဟာ mobiwa မိတ်ဆက်မူပိုင်ခွင့်
အဓိကဖြန့်ဖြူးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲအစီအစဉ်ကို performance ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်အတူ Electro-လက်၌ Nexans တူရကီ, ဇူလိုင်လ 10 2019, MOBIWAY သည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်သင်တန်းသားများကိုနှင့်နို့မှုစနစ်များနှင့်အတူမျှဝေ, တီထွင်ဆန်းသစ် reel ဖြစ်ပါတယ်။
40, Nexans တူရကီ & ဗဟို၏ CEO ဖြစ်သူကိုဖိတ်ကြားနှင့်အနောက်တိုင်းအာရှအထွေထွေမန်နေဂျာဂျရုမ်း Leroy နှင့်မူဝါဒလုပ်ငန်း၏ Nexans တူရကီအရောင်းဒါရိုက်တာအဖွင့်မိန့်ခွန်းနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ ပတ်သက်. အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်ထားပါတယ် အလုပ်, နည်းပညာဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အားသာချက်များကိုအသုံးပြုသူများကကမ်းလှမ်းပြီးအသေးစိတ်တင်ပြချက်တွေကိုနားထောင်သောသူတို့နှင့်အတူမျှဝေ Mobiway ။
Nexans '' သစ်ကိုမူပိုင်ခွင့်ပလပ်စတစ်စက်သီးကိရိယာအစုံနှင့်ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်စနစ်, roller သယ်ယူပို့ဆောင်ဖို့လက်တွေ့ကျတဲ့နှင့်လုပ်ရတဲ့-အခမဲ့လမ်း, အရှင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးဆွဲလွယ်ကူချောမွေ့အသုံးပြုသူများအများ၏ဘဝတွေကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်ရည်ရွယ်သည်။
လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအားဖြင့်ပိုမိုပေါ့ပါးနှင့် 1% ကို ABS ပစ္စည်း spool xnumxm'lik တစ်ခရီးဆောင်ကြမ်းပြင်ကနေ2သို့မဟုတ် 5003မှကျေးဇူးတင်ပါသည်, အခိုငျအမာသည်အသှငျအပွငျ Mobiway, 100 နှစ်အာမခံပြန်သုံး။
• cable ကို Cross-ကဏ္ဍများအပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားခြားနားသောအရှည်ကိုအသုံးပြုပြီးများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေ
•မက် 30 ကီလိုဂရမ်။ အလေးချိန်အားဖြင့်လွယ်ကူသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
• foldable ထမ်းလက်ကိုင်
• roller အသိုက် stack / အာကာသငွေစုဖြတ်သန်း
• 100% ပြန်လည်အသုံးပြုပစ္စည်းများ
Nexans တူရကီရဲ့ CEO & ဗဟို၏ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့်အနောက်အာရှဂျရုမ်း Leroy,: "Nexans ရည်မှန်းချက်ငါသည်ဤသိသိသာသာပံ့ပိုးကူညီကြလိမ့်မည်ယုံကြည်ထားတဲ့လျှပ်စစ်နှင့် Mobiway ၏နေ့စဉ်ဘဝလွယ်ကူချောမွေ့ရန်ဖြစ်ပါသည်။ Gaziantep အတွက်ဖြန့်ချိလျက်ရှိဒီသစ်ကိုပဏာမခြေလှမ်းအားဖြင့်ကျေနပ်Dolayıayrıငါ Nexans ကိုယ်စားတက်ရောက်ခဲ့သည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်ဧည့်သည်များကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ "ငါသည်သူတို့၏ခံစားချက်များကိုမျှဝေပါ။
Nexans တူရကီအရောင်းပေါ်လစီအလုပ်လုပ်ဒါရိုက်တာ: "ဧည့်သည်များများ၏တက်ကြွစွာပါဝင်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အစည်းအဝေးပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့ Nexans ဖွံ့ဖြိုးသည့်ဆန်းသစ်သောချဉ်းကပ်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြေရှင်းချက်ကျွန်တော်တစ်ဦးခြေလှမ်းတဘက်, ဘူးအကျိုးစီးပွားနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်နှင့်သုံးစွဲသူများအားဖြင့်တန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်အလွန်အပြုသဘောဆောင်တဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်သိမြင်တစ်ဖန်အကြီးအစိတ်ဝင်စားမှုပြ အမြဲတမ်းအတွက်လှုံ့ဆော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်ဖို့ပါ "ဟုသူကဆိုသည်။
Bombardier သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရဲ့နယူး Eurasia ရထားပို့ဆောင်ရေး Solutions ဟာ 2014 တရားမျှတသောမိတ်ဆက် 08 / 03 / 2014 မိတ်ဆက် Eurasia ရထား 2014 တရားမျှတသောက Bombardier သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရဲ့နယူးပို့ဆောင်ရေး Solutions: ဥရောပအာရှရထား6တရားမျှတသောအပေါ်ရထားလမ်းနည်းပညာ၏ခေါင်းဆောင်များ, Bombardier သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, အစ္စတန်ဘူလ်ကုန်စည်ပြပွဲစင်တာ 8-2014 မတ်လသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်, ဖော်ရွေဆန်းသစ်နှင့်နည်းပညာအဆင့်မြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြေရှင်းနည်းများ, တူရကီ '' s ကိုလျှင်မြန်စွာ Bombardier ZEFIRO မြန်နှုန်းမြင့်ရထား, မောင်းသူမဲ့ကား Bombardier Traxx စက်ခေါင်းနှင့် AC နောက်ဆုံးမိုင်အညီရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကဖွံ့ဖြိုးဆဲခြင်း, အလိုအလျှောက် Bombardier INNOVIA မိသားစုကိုမိတ်ဆက်။ ဥရောပအာရှရထား Bombardier သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Solutions လယ်ပြင်၌ရှိသောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ထုတ်ကုန်များ၏မြန်နှုန်းမြင့်ခရီးသွားက Bombardier ZEFIRO မိသားစုအဖြစ်အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းအတွက်ထိပ်တန်းမြန်နှုန်းကန့်သတ်နှင့်အတူ 2014 ကီလိုမီတာ km / h ထံမှ 250 350 အရောင်းမြှင့် ...
ရုရှားကအသစ်တခု AC အလျှပ်စစ်ကုန်တင်ခေါငျးမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည် 12 / 08 / 2014 ရုရှားကအသစ်က AC အလျှပ်စစ်ကုန်တင်စက်ခေါင်းပွဲထုတ်မိတ်ဆက်: ရုရှားမီးရထားအလုပ်သမားများနေ့အခမ်းအနားအောက်မှာသြဂုတ်လအတွင်း3အသစ်တစ်ခုလျှပ်စစ်ကုန်တင်ခေါငျး 13 မဂ္ဂါဝပ် AC အမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါလုပ်တဲ့စက်ခေါင်းစက်ရုံမှနှင့်ရုရှားမီးရထားတီထွင်သောသူသည်ဤသည် Transmashholding ရဲ့ Novocherkassk လျှပ်စစ်စက်ခေါင်းကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာသြဇာအာဏာအရှိဆုံးလျှပ်စစ်ကုန်တင် AC အခေါငျးကြောင်းမိန့်တော်မူ၏။ Tashet-Taksimoda အကြား perpendicular မျဉ်းကို segments များ4တန်ချိန်ထက် ကျော်လွန်. ဝန်ကိုဆွဲဆောင်ဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့ကြောင်းတစ်ကဏ္ဍ5ES7000K Baikal-Amur မီးရထားခေါငျးစီမံကိန်းကို။ လက်မှတ်ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက် RZD 2014 နှစ်စက်ခေါင်းကိုအပ်ပါလိမ့်မည်နှစ်တွင် 2020, 53 ၏နောက်ဆုံးသုံးလပတ်အတွက်စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။
Hitachi က၎င်း၏အသစ်ကကို AT-2014 200 မိတ်ဆက်သည့် InnoTrans ရထားလမ်းတရားမျှတတဲ့ 10 / 10 / 2014 Hitachi က၎င်း၏အသစ်ကကို AT-2014 200 အဆိုပါ InnoTrans ရထားလမ်းတရားမျှတတဲ့မိတ်ဆက်: AT-200 သစ်ကို Hitachi ရထားဘာလင်ရှုပ်ထွေးအတွက်စက်ခေါင်းများနှင့်ပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာများအတွက်အချက်ပြဖြေရှင်းချက်ပြပွဲမှာမိတ်ဆက်ပြသ InnoTrans ကစားကွင်းသဘောပေါက်လာတယ်။ မကြာသေးမီနှစ်များတွင် Hitachi ရထားဥရောပ UK မှာအောင်မြင်သောစီမံကိန်းများအပေါ်လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အနောက်လိုင်းအတွက်အလုပ်လုပ်ရသောအတွင်းတစ်နှစ် 2009 အချင်းချင်း Express ကိုအစီအစဉ် (IEP) တွင်အတန်းအစား 395 ရထား set ကိုအတွင်းန်ဆောင်မှုများပေးအပ်ခြင်းနှင့်ပြီးနောက်အင်္ဂလန်ရဲ့ပထမဦးဆုံးပြည်တွင်းမြန်နှုန်းမြင့်ရထားများနှင့်မဟာအနောက်တိုင်းအဓိကလိုင်း 596 trenlik, ဗြိတိန်အတွက်လမ်းကြောင်းသစ်အသစ်တစ်ခုကိုစာချုပ် Hitachi ရထားဥရောပလက်မှတ်ရေးထိုး ဒါဟာဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ထုတ်လုပ်။ နယူတန် Aycliffe ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆောက်လုပ်ရေး၏အင်္ဂလန်ရဲ့မြောက်ဘက်အရှေ့ ...
İzmir Metro Introduces နယူးရထား 08 / 08 / 2015 İzmir Metro Introduces နယူးရထား: Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အများပြည်သူနှင့်အတူသစ်ကိုမက်ထရိုရထား၏ဒီဇိုင်းကိုမျှဝေခဲ့သည်။ တရုတ်ကုမ္ပဏီရထားလမ်း CNR ၏ဝယ်ယူနှင့်အတူယခုနှစ်အစောပိုင်းကသဘောတူညီမှုလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အသစ်ဆုံးဖြတ်ချက်မက်ထရိုရထား၏နံပါတ်တိုးမြှင့်အမိန့်ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်, ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ အဆိုပါလှည်းများအတွက်စုစုပေါင်းသဘောတူညီချက် 17 5, ရထား 192 သန်း TL တန်ဖိုးကိုခဲ့ကြသည်။ ယူအရေအတွက် CNR စပါးကိုလှည်း 182 တညျ့ခဲ့သည်အသစ်တစ်ခုဆုံးဖြတ်ချက်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင်ထုတ်လုပ်သောလိမ့်မည်ပထမရထားအောက်တိုဘာလ 2016 နှစ်များတွင်ကယ်နှုတ်ခံရဖို့မျှော်လင့်ရသည်။ အားလုံးရထားများ၏ပို့ဆောင်မှုမေလတွင်အဆုံးသတ်စီစဉ်ထားသည် 2017 ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့သည်။ မတိုင်မှီတရုတ်ထံမှ Izmir မက်ထရို ...
Bombardier သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, InnoTrans မှာထုတ်ကုန်အသစ်တွေမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည် 2016 22 / 09 / 2016 Bombardier သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, InnoTrans 2016 မှာထုတ်ကုန်သစ်များမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်: ရထားစနစ်ကနည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခု Bombardier သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသူထုတ်ကုန်အသစ်ဘာလင် 2016 InnoTrans အတွက်လွှတ်တင်သဘောပေါက်လာတယ်။ အဆိုပါအချက်ပြစနစ်ကလည်းသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အသစ်တွေမိတ်ဆက်ခဲ့သည်သည်အထိအပေါငျးတို့သဖြေရှင်းနည်းများကိုပူဇော်သက္ကာဘို့စဉ် Bombardier သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ဂျာမနီ InnoTrans 2016 သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားမျှတသောရထား, မက်ထရိုနှင့်ရထားလမ်းစနစ်များထဲကနေဘာလင်တွင်ကျင်းပ။ Movie, Maxx မြေအောက်ရထားပလက်ဖောင်း InnoTrans 2016 မှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြသခဲ့ပါသည်လျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာမြို့ကြီးများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဒီဇိုင်း။ အများဆုံးတန်ဖိုးများအပေါ်အခြေခံပြီးişletimeci modular နှင့်စွယ်စုံတစ်ခုတည်းဖြေရှင်းချက်၏ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့အဆင်ပြေအောင်နိုင်သည့်ရုပ်ရှင် Maxx ပြွန်။ Movie, Maxx မြေအောက်ရထားပလက်ဖောင်း, ခရီးသည်တင်စွမ်းရည်, စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု, ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့် ...
Bombardier သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရဲ့နယူး Eurasia ရထားပို့ဆောင်ရေး Solutions ဟာ 2014 တရားမျှတသောမိတ်ဆက်
ရုရှားကအသစ်တခု AC အလျှပ်စစ်ကုန်တင်ခေါငျးမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်
Hitachi က၎င်း၏အသစ်ကကို AT-2014 200 မိတ်ဆက်သည့် InnoTrans ရထားလမ်းတရားမျှတတဲ့
İzmir Metro Introduces နယူးရထား
Bombardier သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, InnoTrans မှာထုတ်ကုန်အသစ်တွေမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည် 2016
Allison ဂီယာဥရောပတိုက်တွင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်fuelsense® xnumx't Busworld တူရကီအသစ်တစ်ခုအထုပ်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်
တူရကီ၏ Nexans Cable ကိုစက်မှုပို့ကုန်ချန်ပီယံဖြစ်လာ
မူပိုင်ခွင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု 50 ရာခိုင်နှုန်း Pay ကိုလျော့နည်းအခွန်
မူပိုင်ခွင့်Burulaş Persomatik ကမ္ဘာ့ဖလားဟန်ပြ